Manampy ny famonoana tena ny hafatra, ny rohy fanasana ary ny vaovao maro hafa ny Telegram | Avy amin'ny mac aho
Nohavaozina ny rindranasa Telegram for Mac hanampiana fanavaozana fanahafana isan-karazany sy fikirana vaovao hafa. Amin'io lafiny io, ny tena miavaka dia ny fahatongavan'ireo Ireo hafatra azo alamina ho voafafa ho azy aorian'ny 24 ora na herinandro.
Saingy tsy izany no zava-baovao amin'ny kinova 7.5 navoaka ho an'ny Mac, ity dia miaraka amin'ny rohy fanasana vaovao ho an'ny tarika Telegram sy fantsona. Nahita fiasa vaovao ihany koa izahay tao amin'ny vondrona chat izay afaka manitatra izao rehefa manakaiky ny fetra ampiasain'ny mpampiasa azy ireo ary etsy ankilany, manampy ny fanitsiana bibikely, sns.
Ao amin'ny Soy de Mac dia tsy ho sasatra mamerina izany izahay Telegram dia mandresy ny lalao amin'ny sisa amin'ireo fampiharana fandefasan-kafatra raha ny momba ny fanavaozana, ny asa ary ny safidy dia misy. Miharihary fa tsy fampiharana tonga lafatra izany amin'ny lafiny rehetra, manana ny lesoka izy io saingy tsikelikely ny fahazoana olona maro hanatevin-daharana ny fampiasana ary izany dia famantarana tsy azo lavina fa manao zavatra tsara ankoatry ny fameperana farany WhatsApp izay mpifaninana lehibe amin'izy ireo no mahatonga ny olona misintona sy mampiasa azy, na dia tsy hitanao loatra aza ny fampiasana azy raha ny fahitana azy.
Maimaimpoana ho an'ny rehetra ny fampiharana sy ity fanavaozana vaovao ity mpampiasa Ary ny tsara indrindra dia ny fampitomboana endrika miaraka amin'ireo rindranasa misy ho an'ny fitaovantsika rehetra, mba hahafahantsika mampiasa azy io amin'ny fitaovana Mac, iPhone, PC na Android.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Programa Mac » Mac App Store » Manampy ny famonoana tena ny hafatra, ny rohy fanasana ary ny vaovao bebe kokoa ny Telegram
Akaiky ny premiere i Cherry ary manana tranofiara vaovao izahay
Vola iray tapitrisa euro natolotr'i Apple ho an'ny fikambanana tsy mitady tombontsoa LGTBI + Encircle